CAT-5 အဆင့်အထိရောက်လာတဲ့ စူပါတိုင်ဖွန်း NIDA | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
CAT-5 အဆင့်အထိရောက်လာတဲ့ စူပါတိုင်ဖွန်း NIDA
လာမဲ့ ၁၂ နာရီအတွင်းမှာ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA ဟာ အဆင့်-၅ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ TSR data တွေမှာ ဖေါ်ပြထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီနေ့ညနေ ဂျပန်စံတော်ချိန် ၃ နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂နာရီခွဲ) အချိန်မှာ အဆင့်-၅ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး အဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီကို ၁၄၅ မိုင်မှ ၁၇ဝ မိုင်နှုန်းအထိရှိတဲ့ လေပြင်းများဟာ ကီလိုမီတာ ၃ဝ အချင်းရှိတဲ့ “မုန်တိုင်းမျက်စေ့” တည်ရာ ဗဟိုချက်မှာ တိုက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ (အခုသတင်းကို ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ မုန်တိုင်း NIDA ဟာ စူပါတိုင်ဖွန်းအဆင့် Saffir-Simpson Typhoon Scale: Category5ကိုရောက်သွားပြီ လို့ သိရပါတယ်)
မုန်တိုင်းဟာ မြောက်- အနောက်မြောက်ဘက်ကို တစ်နာရီ ၁၄ မိုင်နှုန်းနဲ့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေကြောင်းလဲ သိရပါတယ်။
မုန်တိုင်းရဲ့ အရွယ်အစားကတော့ အချင်း ၇၄ဝ ကီလိုမီတာ (၄ဝဝ နော်တီကယ်မိုင်) သို့မဟုတ် မိုင်အားဖြင့် မိုင် ၅ဝဝ ခန့်ရှိနေတဲ့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ အရွယ်အစားဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက် ဖိလစ်ပိုင်စံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီ မှာတော့ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA ဟာ သူ့ရဲ့ အမြင့်မားဆုံး စွမ်းအားအဆင့်ကို ရောက်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ လူဇုန်ကျွန်းကြီးရဲ့ အရှေ့ဘက် ၁၈၁ဝ ကီလိုမီတာ အကွာအဝေး(မိုင် ၁၁၃ဝ ခန့်) မှာ ရောက်ရှိဗဟိုပြုလိမ့်မယ်လို့ ဖိလစ်ပိုင် မိုးလေဝသဌာနက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 26W, NIDA, super-typhoon, weather.2Comments »
2 Responses to “CAT-5 အဆင့်အထိရောက်လာတဲ့ စူပါတိုင်ဖွန်း NIDA”
တောင်တရုတ်ပင်လယ်အနောက်ပိုင်း စင်္ကာပူအနီးက လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ မြောက်ဘက်ကို အနည်းငယ်ရွေ့လျားပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမြို့ တောင်ဘက် မိုင် ၂၃ဝ ခန့်မှာ ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး လာမဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ချေကတော့ POOR အဆင့် (ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းသောအဆင့်) ကို လျော့ကျသွားပြီလို့ JTWC သတင်းအချက်အလက်များအရ သိရပါတယ်။
မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၆းဝ၂ နာရီတွင် တွေ့မြင်ရသော စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA
« တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA(26W)နှင့်လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း(27W)
အဆင့်-၅ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA ဖိလစ်ပိုင်ကိုဒုက္ခမပေးနိုင် »